समस्यामा रेउघा अस्पताल | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / समस्यामा रेउघा अस्पताल
समस्यामा रेउघा अस्पताल
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार, स्लाइड March 14, 2019	0 47 Views
रोल्पा । रोल्पाको रेउघामा रहेको जिल्ला अस् पतालमा लाइन गएसगै टुकी वा मोबाइलको उज्यालोमा अप्रेशन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। स्वास्थ्य उपकरणहरु सञ्चालन गर्न जेनेरेटर नभएका कारण यस्तो समस्या आएको डा. प्रकाश बुढाले बताउनुभयो। केही साताअघि २६ वर्षीया जुनकुमारीको अप्रेशन गर्दा रातको १२ बजेको थियो।
लाइन गयो। डा. प्रकाश भन्नुहुन्छ– बत्ती मात्र बाल्न मिल्ने सानो जेनेरेटरको पनि तार चु“डिएको रहेछ। मोबाइलको उज्यालोमा धौधौ अप्रेशन गरियो। अप्रेशन गर्दा बत्ती गएको यो पहिलो भने होइन। पटकपटक हुने यस् तो समस् याले चिकित्सक आजित छन्। १५ शैया रहेको जिल्ला अस्पताल रोल्पामा आउने इमर्जेन्सी बिरामीलाई जोखिम मोलेरै भए पनि उपचार गरिरहेको अस् पताल प्रमुख डा. सुशील आचार्य बताउनुहुन्छ।
जेनेरेटरका लागि उर्जामन्त्री वर्षमान पुन तथा प्रदेश सरकारस“ग समेत माग राख्दा पनि अहिलेसम्म सुनुवाई नभएको अस् पतालका सिनियर अहेव कुलबहादुर डा“गीले बताउनुभयो। करिब पचास केभी क्षमताको जेनेरेटर भएमा चौबिसै घन्टा सेवा दिन सकिने उहा“को भनाइ छ। त्यस् तै जिल्ला अस् पताल रोल्पामा एउटा मात्र भिडियो एक्सरे मेशिन छ। निकै पुरानो भएकाले त्यो पनि पटकपटक बिग्रिन्छ। ल्याब सेवा जेनतेन सञ्चालन भए पनि मेशिन बिग्रिदा भने समस् या हु“दै आएको छ। २०३४ सालमा स् थापना भएको रोल्पा अस् पताल भवन अहिले जीर्ण अवस् थामा छ। १५ शैया भए पनि करिब २५ शैया सञ्चालन हु“दै आएको जिल्ला अस् पताललाई ५० शैया बनाउन भवन निर्माण भइरहेको छ। भवन निर्माणपछि यसअघिको एउटा कोठामा अप्रेशन गर्ने र अर्को कोठामा आराम गर्न पठाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ। बिरामीको चापस“गै भवन नबन्दै पनि ५० शैया अनुसारको दरबन्दी हुनुपर्ने स् वास् थ्यकर्मीको माग छ। जिल्लाको जनसंख्याको आधारमा पनि दरबन्दी तथा भौतिक संरचना थप गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। कुल २९ करोड ५१ लाख २२ हजारको लागतमा निर्माण हुन लागेको जिल्ला अस् पतालको २०७७ असोजमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ। निमार्ण कामको जिम्मा आशिष श्री जयन्ती ड्रागन जेभी काठमाडौंले जिम्मा लिएको छ।
रोल्पामा नवौं तहको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको दरबन्दी छ। तर अहिलेसम्म एकजना पनि आएका छैनन्। देशकै ठूला पद ओगटेका रोल्पाली नेताहरुका सामु यो लाजमर्दो विषय भएको जिल्लाबासीको भनाइ छ। दरबन्दी हुनु तर कर्मचारी नआउनु वा ल्याउन कोसिस नगर्नुले नेतृत्वमाथि नै शंका उब्जने सिनियर अहेव कुलबहादुर डा“गी बताउनुहुन्छ। दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी नहु“दा तल्ला तहका कर्मचारीले कार्यालय समालिरहेका छन्। जम्मा २५ स् थायी दरबन्दी रहेको जिल्ला अस् पताल रोल्पामा नवौं तहका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टसहित दुईजना कर्मचारीको अभाव छ। जिल्ला अस् पतालमा अस् थायी र करार कर्मचारी मात्र ५० बढी छन्। जिल्ला अस् पताल रोल्पाबाट ७० विभिन्न औषधि निःशुल्क पाइने व्यवस् था छ। तर भनेकै समयमा सबै औषधि उपलब्ध नहुने अस् पतालले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले औषधि खरिदका लागि ढिलोगरी अख्तियारी दिएकाले पनि औषधि पर्याप्त नभएको सिनियर अहेव कुलबहादुर डा“गीले बताउनुभयो। अब करिब एक महिनासम्मका लागि मात्र औषधि स् टक छ।
स् थानीय तहहरुले पनि बजेट व्यवस् थापनमा स् वास् थ्य क्षेत्रलाई त्यति ध्यान दिन सकेका छैनन्। जसका कारण स् वास् थ्य केन्द्रहरुमा औषधि अभाव देखिदै आएको छ। जिल्ला अस् पतालको आफ्नै फार्मेसी सेवा समेत सञ्चालनमा छ। रोल्पा अस् पतालमा ब्लड बैंक छैन। अप्रेशन गर्दा आवश्यक पर्ने रगतका लागि रगत समूह मिलेकालाई स् वास् थ्यकर्मीले नै रगत दिने गरेका छन्।
पछिल्लो समय केही युवाहरुको सक्रियतामा ब्लड फर रोल्पा नामक समूह निर्माण गरेर रगतको अभाव टार्दै आए पनि दीर्घकालीन समस् या भने हल हुनसकेको छैन। हालसम्म करिब आधा दर्जन स् वास् थ्यकर्मीले बिरामीलाई रगत दिइसकेको जिल्ला अस् पताल प्रमुख डा. सुशील आचार्यले बताउनुभयो। रोल्पा अस् पतालमा जतिबेला भने पनि डाक्टर भेटिन्छन्। उनीहरुको निजी क्लिनिक नभएको र अस् पताल परिसरमै बस् ने व्यवस् था भएकाले पनि बिरामीलाई सहजै सेवा उपलब्ध हुने अस् पताल विकास समितिका अध्यक्ष घनश्याम आचार्य बताउनुहुन्छ।
रोल्पा अस् पतालमा पर्याप्त डाक्टर छन्, निःशुल्क औषधि छ। न्यूनतम शुल्कमा भिडियो एक्सरे, प्रयोगशाला परीक्षण र एक्सरे सेवासमेत उपलब्ध छ। भौतिक संरचनाको अभावमै भए पनि डाक्टरले बिरामीलाई सक्दो सेवा दिन्छन्। तर बिरामीको रोजाई निजी मेडिकल, क्लिनिक नै पर्ने गरेको छ। निजी मेडिकलमा जाने र सन्चो नभएपछि मात्र सरकारी अस् पतालमा आउने परम्परागत संस् कार अझै तोडिएको छैन। स् थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए पनि स् वास् थ्य चेतना अभिबृद्धि गर्नतिर भने धेरैले चासो नदिएको स् वास् थ्यकर्मीहरु बताउ“छन्। सरकारी अस् पतालले राम्रो सेवा दिन्छ भनेर आकर्षण बढाउनतिर भन्दा पनि बेवास् ता गरेर हिड्नु जनप्रतिनिधिको गैरजिम्मेवारीपन भएको उनीहरुको भनाइ छ। अहिले साविकका सबै गाविसहरुमा स् वास् थ्य चौकी छन्। सरकारी अस् पतालमा पाइने सेवा सुविधाबारे जानकारी दिन नसक्दा पनि यस् तो समस् या आएको सरोकारवाला बताउ“छन्। रोल्पामा अहिलेसम्म कति निजी क्लिनिक छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन। कुन कुन औषधि चलाउन पाउने भन्ने विषयमा समेत अभिमुखीकरण वा अनुगमन हुनसकेको छैन। जसका कारण स् वास् थ्य क्षेत्रको विकृति चुलिदो छ।
Previous: वार्ताबाटै निकास
Next: ज्येष्ठ नागरिकलाई लुम्बिनी भ्रमण